राशिफल - Likhu Online
३० कार्तिक २०७७, आईतवार ०६:३१ प्रकाशित
बि . संं . २०७७ साल कार्तिक ३० गते आइतबार तदनुसार सन २०२० नोभेम्बर १५ तारिखको तपाइको राशिफल मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
तपाईं शारीरिक र मानसिक स्फूर्त महसुस गर्नुहुनेछ। घरको वातावरण आनन्दमय रहनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। व्यापार व्यवसायमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मन-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। साथीहरु र प्रियजनहरुसँग रमाईलो यात्राको अवसर मिल्नेछ।
आकस्मिक खर्च हुनाले आर्थिक पक्ष कमजोर रहला। विद्यार्थी वर्गको लागि दिन उत्तम छैन। मध्यान्हपछि घरमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। हरेक कार्यमा सफलता मिल्नाले मन प्रशन्न रहनेछ। प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्।
जग्गा, घर आदि पत्र वा कागजातको बारेमा सावधान हुनुपर्दछ। कुनै कारण बिना परिवारका सदस्यहरुसँग तनाव बढ्नेछ। सन्तानको बारेमा चिन्ता रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा केहि अवरोध आउनसक्छ। आकस्मिक धन खर्च हुने सम्भावना छ। मित्रसँग भेट हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ।
आध्यात्मिक र रहस्यमय ज्ञान प्राप्त गर्न दिन राम्रो छ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। स्फूर्ति र प्रफुल्लताको अभाव हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूमा मतभेद हुनेछ। अत्यधिक खर्च हुनाले आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। यस दिन तपाईं अलि बढी संवेदनशील महसुस गर्नुहुनेछ।
तपाईं मधुरवाणीको साथ कुनै पनि कार्यमा विजयी हुन सक्नुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग आनन्दमय समय बित्नेछ। आफ्नो प्रियजनबाट लाभ उठाउनुहुनेछ। तपाईं प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। प्रेम सम्बन्ध बलियो हुनेछ। आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ।
बोलीको प्रभावको कारण तपाईं लाभदायक र मायालु सम्बन्धहरू स्थापना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको वैचारिक समृद्धिले अन्य मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट दिन लाभदायक हुनेछ। आर्थिक लाभको सम्भावना छ। परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ।
आकस्मिक खर्च बढ्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला। मध्यान्हपछि परिस्थिति सुधार हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। मानसिक सुस्वास्थ्यको साथ बोलीको मिठोपनले अन्य मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्।
विभिन्न क्षेत्रहरुमा लाभ र ख्याति प्राप्त गर्नुहुनेछ। धन प्राप्तिको योग रहेको छ। रमणीय यात्राको योग देखिन्छ। साथी-भाईको लागि खर्च हुनेछ। मध्यान्हपछि शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थता रहनेछ। क्रोधमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ। अनावश्यक वाद-विवादमा फस्न सकिन्छ।
परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। व्यापारमा लाभ पनि हुनेछ। सरकारी काममा फाइदा हुनेछ। धेरै क्षेत्रमा प्रसिद्धी पाउनुहुनेछ। आयमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। यात्राको योग बन्नेछ।
वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका आफन्तबाट शुभ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ। धार्मिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। व्यापार वर्गले व्यापारबाट फाइदा लिन सक्छन्। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ रहनेछ। परिवारमा सकारात्मक वातावरण रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना छ।
क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्नुहोला। परिवारका सदस्यहरूसँग बहस हुनसक्छ। मध्यान्हपछि आफन्त तथा साथी-भाईसँग रमणीय रूपले समय बित्नेछ। धार्मिक यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा शुभ समाचार प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ।
साथी-भाईसँग रमणीय यात्रामा जाने मौका मिल्नेछ। व्यापार व्यवासय क्षेत्रमा लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। मध्यान्हपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेद हुनसक्छ। वाणीमा संयम राख्नुहोस्। आर्थिक व्ययको सम्भावना छ। पुनस्च: राशिफलमा जेसुकै भनिएता पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुस , शुभ दिन